Mormitoota Mirga Namummaa - BBC News Afaan Oromoo
'Amnesty International' waggaa 18ffaa namoonni kunneen itti to'ataman sababeeffachuun akka gadhiifamaniif har'a irraa kaasee duula miidiyaa hawaasaa guyyoota 18 labseera.
Qondaaltoonni Keeniyaa seera naannichaa fi aadaa cabsuun reeffa qatanii baasuun uffata dambii fudhatan jechuun himataman.
“Kanaaf ammoo ragaan jiraataan tokko ‘Karchalleedha’. Namoonni baayyeen gatii ummanni naannoo sanaa baase ‘Karchalleen’ Amboo haa dubbatu jedhu.” Waa’ee ‘Karchallee’ hedduu waan dubbatamuufis, namoonni baayyeen ‘Karchallee’ Amboo kana keessa maaltu jira laata jedhanii gaafatu.
Dhaabbilee idil addunyaa mirga namoomaaf morman adda addaa keessa hojjataa kan turan Dr Daani'el Baqqalaa dhiheenya kana Komishinara Muummee Komishiinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa ta'un muudamaniiru. Isaanis BBC waliin turtii taasisaniiru.
Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa wal-gahiisaa idilee har'a taa'een, Dr. Daani'el Baqqalaa Komishinara Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa gochuun muude.
Magaalaa uffannaan barattoota dubaraafi dhiiraaf adda baasuun itti hin barbaachifne
Magaalaan Maksiikoo yunifoormiin barattootaa dubaraafi dhiiraaf adda baasuun hin barbaachisu jette
Semeniyaanin murtee Waldaan Atileetiksii Addunyaa irratti murteesse mo'atte
Atileetii beekamtuu Afrikaa Kibbaa Kaaster Semeniyaa akka dorgommii atileetiksiitti deebitu Manni Murtii Ol-aanaa Siwiizerlaand beeksisee.
Lammileen biyyoota alaa saala wal-fakkaataa (homosexuals) daawwannaaf gara Itoophiyaa dhufuu mormuun gurmuu waldaalee hordoftoota amantaa Ortodoksii 120 olii kan ta'e 'Sillistuu Mi'it' ibsa baaseera.
Barattuun Baanglaadeesh Nusraat Jahaan mana barumsaa keessattii barsiisaa isheerraa qoccollaan saalaa irra gahaa akka jiru himachuu isheen ibiddaan gubuun ajjeefamte.
Rogeettiin Keeniyaa mirga namoomaaf falmitu Kaaroolaayin Miwaataa duutee argamte
Kaaroolaayin Miwaataa ajjeechaa poolisiin namoota irratti raawwatu kan qoratu yoo tahu poolisiin garuu duuti ishee kana waliin wal hin qabatu jedhe
Dhaabbanni Mirga Namoomaa Human Rights Watch jedhamu mootummaan Itoophiyaa jijjiirama guddaa agarsiisuu hime.
Humaan Raayits Wach, mootummaan Itoophiyaa angawoota olaanoo naannoo Somaalee kan akka Abdii Mohammad Omaar fi hogganaa Liyyuu Poolisii Abdirahmaan Abdillaahii Buraalee irratti qorannoo cimaa akka gaggeessu gaafateera.
Addi Bilisummaa Oromoo fi dhaabonni lama biroo tarree shororkeessummaa Itoophiyaarraa haqamaniiru. Kuni namoota maqaa ABO tiin himatamanii hidhamanii turaniif hiika maalii qaba? Itti dhiyaadhaa.
Dhaabbanni Idil-addunyaa Amanasitii Intarnaashinaal, tarkaanfiin labsii yeroo mudamaa kaasuuf motummaa Itoophiyaatiin taasifame qorannoo sarbama mirga namoomaatiin hordofamu qabaata jedhe.
Haala qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaarratti ibsa quuqamtoota mirgaa
Waggoota dura seerota gara garaa ba'aniin walqabatee qabiinsi mirga namoomaa Itoophiyaa, naamoonniifi dhaabbileen mirgaaf quuqaman qormaata rakkisoo keessa akka ta'an gabaasni tokko mulliseera.
Mootummaan Itoophiyaa sooftiweerii basaasa Intarneetiitti fayyadamuun rogeeyyii fi mormitoota siyaasaa basaasuu cimsee itti fufeera - Hiyuman Raayits Waach
Mootummaan Itoophiyaa lammiilee biyyoota ollaatti kolu galtummaa gafatan humnaan butee gara biyyatti deebisuun himatameera.